Hafatra eny am-pandehanana: Ny kanton’ireo fiteny Swahili any anatin’ireo fitaterambahoaka ao Zanzibar · Global Voices teny Malagasy
'Mahazatra antsika ny mahita ireny takelaka ireny eny rehetra eny'
Voadika ny 21 Novambra 2019 12:00 GMT
Vakio amin'ny teny Español, 日本語, Italiano, English
“Haina sababu” na “Tsy misy antony,” soratra ao an§damosin'ny fiarabe iray miloko manga ao Stone Town, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
Matetika ny fitohanana ao amin'ireo Nosy Zanzibar no tonga miaraka amina poezia miendrika msemo (fomba fiteny) soratana ao aorian'ny kamiao iray, dala-dala (fitateram-bahoaka na kamiao kely) na bajaj. Tsy hoe manala andro sy mampiala voly fotsiny an'ireo mpandeha akory ireny fiteny ireny – fa mampianatra azy ireo koa. Ny tsirairay avy dia misy dikany ara-bakiteny avokoa arahina dikan-teny tsy manam-pahataperana.
Indraindray ireny fomba fiteny ireny dia “mitso-drano ny dia” ary “miaro ny dia”, raha ireo hafa kosa mampiako ireo fihetsehampo ao anaty fiarahamonina Swahili, miainga amin'ny resaka an-dalambe mankamin'ireo tononkira, ny filozofia baraza (dabilio eny an-dàlana) mankamin'ny fahendrena fahiny manitsinitsy momba ny fitiavana, ny vintana sy ny harena. Matetika izy ireny no miteraka fifanakalozankevitra na miteraka hehy goavana. Saingy endrika kanto miala aina izy io, satria maro dia maro ireo tompona fiara no misafidy fampahafantarana tonga dia vonona na mankafy ny “fijery madio.”
Dedaka manana tantara lavabe amin'ny resaka varotra sy fifanakalozana i Zanzibar, nosy ao amin'ny ranomasimbe Indiana, atsinanan'ny tanibe Tanzania. Avy amin'ireo fifandraisana an-jato taonany maro nisy teo amin'ireo Arabo sy ireo Bantoa mpivarotra ny fiteny Swahili ary tototr'ireo sarinteny, ankamantatra ary ady rima. Ankafizin'ireo mpiteny Swahili ny lmanisika sombim-pahendrena any anaty fifanakalozankevitra isanandro – ary hita eny rehetra eny foana ireo ohabolana malaza, tsy ao Zanzibar irery ihany, fa koa ao amin'ny tanibe Tanzania sy ao anatin'ny faritra.
“Nahazatra ny nahita ireny takelaka ireny tny rehetra teny. Teny an-damosin'ireo bisikilety,dala-dala, eny rehetra eny, tsy dia betsaka loatra intsony ankehitriny, saingy mbola hitanao izy ireny,” hoy Masoud Soud, mpandraharaha iray ao Stone Town, renivohitra. Matetika ireny hafatra ireny no tamin'ny tànana no nadokoan'ireo artista manokana mpahay azy ireny, taty aoriana kely ireo mpamily dia nanomboka nanafatra an'ireo taratasy fandraikitra manokana, namboarina tamin'ireo mpanonta taratasy ao an-toerana. Ankehitriny, mahazatra ny mahita taratasy fandraikitra nolokoina tamin'ny tànana sy vita printy, saingy tsy matetika.
Lazainy fa amin'ny ankapobeny ireny teny ireny dia mipoitra eny an-damosin'iro dala-dala satria matetika io endrika fitaterana io — heverina ho ny mora indrindra — no mahazo felaka mahamahy. Ataon'ireo mpitatitra feno mpandeha reraka be loatra ny fiara ary fitapitahan-dry zareo aminà resaka matavy ireo mpanjifa, raha toa ireo mpamily mampiakatra ambony ny hafainganam-pandeha sady misongona an'ireo fiara madinika eny amin'ireny làlana feno lavadavaka ireny.
Afetak'ireo tompona Dala-dala ao an-damosin'ny fiaran-dry zareo ireo tononkira ho toy ny fomba iray “hamaliana” an'ireo mpamily fiara hafa, alohan'ny ananan'izy ireo fotoana hampanenoana anjomara na hikiahana fitarainana.
Fantatry ny eto fa hiresaka ny momba anao ny olona. Apetak'ireo mpamily dala-dala eo an-damosin'ny fiaran-dry zareo ireny anarana ireny, satria fantatr'izy ireo fa haneho hevitra mikasika ny endriky ny fiarany ny olona, ny fomba familiny na ny fomba ataony handraisana an-tànana an'ireo fifandirana, ary dia te-hanakana anao ry zareo — tian-dry zareo ianao hihomehy.
Hannah Gibson, mpiandraikitra fampianarana momba ny teny ary mifantoka manokana amin'ireo fiteny bantoa sy ireo fianarana Swahili ao amin'ny Anjerimanontolo ao Essex, dia manipika fa ireo olona erantany dia tia milalao teny ary tsy hafa amin'izany i Afrika Atsinanana.
Zary lasa toy ny takelaka fampitàn-kafatra mandehandeha ireo dala-dala sy bajaj. Ao anaty tontolo iray izay ahatsapan'ny olona ho tsy misy mihaino sy tsy misy mpijery, manjary lasa toy ny fanànana mpihaino an'aliny maro io fomba iray io arakaraky ny ihodinkodinan'ny fiara eraky ny tanàna [sy manerana ireo Nosy].
Endriky ny poezia sosialy iraisana ireny takelaka ireny, somary mitovy amin'ny kanga, lamba marevaka loko amidy miaraka tsiroaroa, asiana ohabolana tokana misoratre eny amin'ny sisiny manodidina. Ny hafatra na ny “anarana” kanga dia matetika marika manana dikany roa ary milalao an'ireo teny mampivanàka sy mahafinaritra. Toy izany koa, ireo hafatra kely eny amin'ireo fiarakodia, kamiao ary bajaj dia fomba fampitàna fehezana soatoavina, fomba fiaina sy faniriana izay taratry ny fiainan'ireo lehilahy Swahili — ireo izay tena “mampita” ity famantarana ity.
Indreto vitsivitsy amin'ireo hafatra tena mandresy lahatra hita manodidina an'i Zanzibar tamin'ny volana Oktobra 2019.
‘Aza izaho no lalaovina’
Sarotra ireo làlan'i Zanzibar ary mety hiaro tena hatrany ireo mpamily. Ity no fomba famelezana:
“Usinichezeshe” na “Aza iaho no lalaovina,” soratra menamena hita ao an-damosin'ny fiarabe iray mangamanga mandalo an'ireo trano Michenzani, Stone Town, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
“Eny, izay no vaovao, tsy maintsy atao izay handresena”
Hafatra iray isanandro mba hitazonana an'ity toetsaina mpitolona ity sy hahatongavanao any amin'izay alehanao:
“Habari ndio hiyo ubingwe lazima,” “Eny, tena izay no vaovao, tsy maintsy atao izay handresena.” Hita teo amin'ny bajaj iray tao an-tsenan'i Darajani, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
‘Mahatsapà tena ianao’
Ny fandehanana na dia amin'ireo elanelana kely indrindra aza dia mitaky fahatsiarovan-tsaina kely:
“Jipange” na “Mahatsapà tena ianao”, hita eo amin'ny fitaratra aoriana an'ny kamiao iray ao Stone Town, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
‘Mitoloma ho an'ny fiainanao
Asa isanandro ny fifohazana sy fandehanana mivoaka. Ampahatsiahivin'ity hafatra ity antsika izay zavatra imatimatesantsika eo amin'ny fiainana isaky ny mitolona hahazo seza iray ao anaty dala-dala isika:
“Pambana na hali yako,” na “Mitoloma ho an'ireo fepetra (iainanao”. Hita eo amin'ny kamiao miantsona ao Stone Town, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
‘Aza miasa saina [amin'io]’
Betsaka ny zavatra mety mampiahiahy antsika rehefa mandeha eny an-dalana isika, na mpamily na mpandeha. Angamba, tsaratsara kokoa ny tsy miahiahy ny amin'izay tsy manjary fa mijanona mifantoka amin'izay mety tsara:
“Usiwaze,” na “Aza miasa saina,” voasoratra eo aorianan'ny kamiao kely iray nampiasaina ho toy ny fitaterana iombonana ao Stone Town, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
‘Ny fotoana no olana’
Tsy olana izay fotoana laniantsika anandramana hirosoana, matetika isika mahatsapa fa tsy dia ampy loatra ny amin'io. Hafatra iray izay mampatsiahy, angamba, ny antony tokony hanafainganana kely ny fandeha:
“Tatizo muda” “Ny fotoana no olana.” Voasoratra eo aorian'ny ‘pick-up’ iray ao Stone Town, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.
‘Ry mpifankatia, raha mba mody isika’
Ilàna fifantohantsaina sy fahasahiana goavana ny fandehanana eny an-dalana. Eo ny fanomezan-tokin'ny fitiavana – rehefa vita fotsiny ny asa:
“Mapenzi tukirudi” na “Ry mpifankatia, raha mba mody isika”, hita eo aorian'ny pick-up iray ao Bwejuu, Zanzibar, Oktobra 2019. Sary an'i Amanda Leigh Lichtenstein, nampiasaina nahazoana alalàna.